mubvunzo Craters of the Moon .....
1 gore 8 ago #696 by PAYSON
Chimwe chezvinhu zvitsva zvitsva zvitsva, Zvinyorwa zveMwedzi, zvakanyatsoitwa. Ndinorarama muIdaho, kungova 100 kana kuti makiromita kubva ipapo ..... SPECTICULAR!!!! Kana iwe uri nhengo yeJUMBO uye uine nzvimbo pane doro rako, ita izvozvo. Zvakakwana zvakakodzera. Kana iwe usina jumusi yeJUMBO, zvinogona kutora nguva yakareba kwazvo kuikanda. Asi, zvose izvo zviri kunze, zvinotonhora.